LEGO® DUPLO® Town 2.5.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.5.0 လြန္ခဲ့ေသာ3လက
ဂိမ္းမ်ား ပညာေရးဆိုင္ရာ LEGO® DUPLO® Town
LEGO® DUPLO® Town ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင့်ရဲ့သူငယ်ပျော်စရာနှင့်အတူဖန်တီးမှု, ကို virtual ကစားအိမ်များကိုတည်ဆောက်ကြစို့, တောက်တောက်အရောင်LEGO®DUPLO®အုတ်, သူတို့သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝကနေကိုသိဇာတ်ကောင်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနဲ့ရိုးရိုးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်ကးအတူနေ့စဉ်ဘဝထွက်ကစား။
ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသင့်ကလေးကဒီအသက်အရွယ်မှာဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်အထူးကျွမ်းကျင်မှုအဘို့, Lego DUPLO မြို့, သင့်ကလေးငယ်သို့မဟုတ်မူကြိုဒဏ်ငွေမော်တာကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်လာအောင်ကူညီသူတို့အားပတ်ပတ်လည်ကမ္ဘာကြီးကိုနားလည်, ဝေါဟာရတိုးမြှင့်, သူတို့၏အမြင်များနှင့်အတွေးအခေါ်များကိုဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
- GREAT FIRST, Lego DUPLO အတွေ့အကြုံ: ရိုးရှင်းသောအလိုလိုသိသင်္ကေတများနှင့်အတူနှင့်
အလှဆင် - ကာဖျော်ဖြေမှုဘူဒိုဇာ function ကို - ကအခြေခံသင်ယူဖို့လွယ်ကူပါတယ်
အဆောက်အဦးများနှင့် stack ။
- အဆောက်အဦးများနှင့်ဖြိုဖျက်: ရုံအစစ်အမှန်ဘဝလိုပဲလေးတွေအဖြစ်အများအပြားတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဖြိုချနိုင်ပါတယ်
သူတို့လိုချင်တဲ့အဖြစ်အိမ်များ! သင့်ကလေးကြီးတွေကို virtual နှင့်အတူအကြောင်း, အကျိုးနှင့်အတူစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်
- Explorer များ: Fun အံ့သြဖွယ်များနှင့်က hidden လျှို့ဝှက်ချက်များကိုသင့်ရဲ့စပ်စုကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းရှာဖွေသူစောင့်ဆိုင်း: အဘယျသို့
သင့်ကလေးသည်နေရောင်ပုတ်သည့်အခါဖွစျသှားသလဲ ဒါမှမဟုတ်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီး? သို့မဟုတ်တစ် DUPLO ကိန်းဂဏန်းသွားသည့်အခါ
- အစစ်အမှန်-LIFE ပတ်ဝန်းကျင်: စစ်မှန်သောဘဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်စားပြုကြောင်း theme သောနေရာများနှင့်
- ROLE-play: သင့်ကလေးဖြည့်ဆည်းအပြန်အလှန်နဲ့အကျွမ်းတဝင်ဇာတ်ကောင်များနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူဆော့ကစားပါလိမ့်မယ်
- အသက်အရွယ်အလိုက်: တောက်ပ animations တွေကို, icons နဲ့လွယ်ကူသောဂိမ်းများအတွက်အညွှန်း - အဘယ်သူမျှမ
လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်အလိုအလျောက် save function ကိုဖတ်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ရေးသားခြင်းနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ပြီးပြည့်စုံ
- လုံခြုံမှုမှာ FIRST: သင့်ကလေးက NO ကြော်ငြာနှင့်အတူ, လုံခြုံ, တံခါးပိတ်ပတ်ဝန်းကျင်ကစားပါလိမ့်မယ်,
အဘယ်ကြောင့် Lego DUPLO နှင့်အတူဆော့ကစား?
Lego DUPLO ကအသက် 1 1/2 မှသင်၏ကလေး၏တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မှကြွလာသောအခါ Play စ၌သင်တို့၏ Partner ဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ တန်ဖိုးဘေးကင်းလုံခြုံမှု, ဘက်စုံသုံးနှင့်တစ်ဦးမေတ္တာသည်စင်မြင့်ကိုသတ်မှတ်လိမ့်မည်ဖန်တီးမှုစဉ်းစားတွေးခေါ်များအတွက်ထွက်ပေါက်မကယ်မလွှတ် - စစ်မှန်သောဘဝ၌၎င်း, ဤကဲ့သို့သောဂိမ်းများကိုရော - ငါတို့ရှိသမျှသည် Lego DUPLO ထုတ်ကုန်ကြောင်းသေချာစေရန်ကလေးကဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျွမ်းကျင်သူများ, ဆရာ, ဆရာမများနှင့်မိဘများနှင့်အတူအလုပ်မလုပ် သင်ယူမှုနှင့်တစ်သက်တာကြာရှည်မည်ကိုကစား၏။ ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ကလေး၏ခရီး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခွင့်ပြုပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
http://aboutus.LEGO.com/legal-notice/Privacy-Policy အပေါ်ဆက်ဖတ်ရန်နှင့် http://aboutus.LEGO.com/legal-notice/terms-of-use-for-apps
Lego က, Lego လိုဂိုနှင့် DUPLO ယင်း Lego Group ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။ © 2017 အဆိုပါ Lego Group မှ။
Lego System ကို A / S ကဝဘ်ဆိုဒ် - LEGO®DUPLO®မြို့ app ကိုပံ့ပိုးမှု
LEGO® DUPLO® Town အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
LEGO® DUPLO® Town အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
LEGO® DUPLO® Town အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
LEGO® DUPLO® Town အား အခ်က္ျပပါ
eduapps စတိုး 11.81k 2.47M
LEGO® DUPLO® Town ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း LEGO® DUPLO® Town အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.5.0
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://aboutus.lego.com/en-us/legal-notice/Privacy-Policy
App Name: LEGO® DUPLO® Town
File Size: 70.54MB
LEGO® DUPLO® Town APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ